Iyo iPhone 7 ichave iine kamera inomhanya uye isina mitsara kumashure | IPhone nhau
Iyo iPhone 7 ichave iine kamera flush uye haizove iine mitsara kumashure
Kana pasina kushamisika, iyo iPhone 7 ichaunzwa munaGunyana. Pakave nerunyerekupe rwemaviri makamera, kushorwa kwemvura uye dzakawanda nhau dzatisinga tsanangure pano. Zvatichaita kudzokorora runyerekupe rwazvino runotaura nezveinotevera smartphone kubva kuapuro yakarumwa. Iyo iPhone 7 ichauya nematanho maviri akakosha maererano nekugadzirwa, imwe ine chekuita nekamera (kana iyo) uye imwe ine maantenna, ma moles maviri akaperekedza iyo iPhone kubva pakatangwa iyo iPhone 6.
MacRumors, ichiita zita rayo rakanaka, yakatumirwa kuvhura iyi nyowani rumor kududza masosi ayo, sekureva kwavo, anga atove akarurama mune fungidziro munguva yakapfuura. Izvo zvavanotaura vanoti izvo kamera iPhone 7 ichave diki maererano nekudzika kupfuura iyo iyo iPhone 6. Isu tinorangarira kuti apo Apple yakapa iyo iPhone 6, uye chaive chishuwo chedu kusaona chinhu chimwe chete zvakare muma6, yakaratidza chigadzirwa chine kamera inobuda, chimwe chinhu chinodzivirira zviteshi kubva pakukwanisa kuzendamira zvakanaka patafura.
iPhone 7, yakafanana ne iPhone 6s asi ine dhizaini iri nani
Asi pane zvakare imwe poindi yakaita kuti chishandiso chive chakashata: mitsara yekumashure kwemaantena, mimwe mitsetse inosungirwa kuitira kuti iyo iPhone irege kurasikirwa nekuvhara uye iripowo mumafoni ese anokwikwidza akavakwa mualuminium. Avo mitsara yaizonyangarika mune inotevera smarphone of Apple.
Masosi anovimbisa kuti dhizaini yeiyo iPhone 7 ichave yakafanana chaizvo neiyo iPhone 6s, inongodaidza kurasikirwa kwehukuru hwakanyanya hwekhamera (zvichienzaniswa nechishandiso) uye maantena. Izvi zvaigoneka kana zvinhu zviviri zvikasangana pamwe: chekutanga, chine hukama nemakamera, zvinogona kunge kuti ivo pakupedzisira vanoshandisa tekinoroji yekambani yakawanikwa naLynx, nyanzvi mukugadzira makamera madiki emidziyo yemafoni uye izvo zvinobvumidza kuiswa kwe mbiri kamera ine Optical zoom. Yechipiri ndeye kushandisa chinhu chitsva icho icho Cupertino kambani inogona kunge iine patent gore rapera.
Chero zvazvingaitika, isu tichiri muna Kukadzi. Kusvikira Nyamavhuvhu runyerekupe rwakawanda harusati rwasvika uye mazhinji acho haana kuzadzikiswa. Chinhu chega ndechekuti shanduko mbiri idzi mukugadzirwa kweiyo inotevera iPhone inoita kunge inogoneka uye inodikanwa. Iwe unofungei nezve zano reiyo iPhone 7 ine yakati wandei dhizaini, isina iyo kamera uye yekumashure mitsara?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo iPhone 7 ichave iine kamera flush uye haizove iine mitsara kumashure
Pazvinhu zviviri izvi, chakanakisa uye chinonyanya kubatsira ndechekuti kamera haibudirire. Kwete nekuti inomiririra dambudziko rekuzvitsigira zvakanaka, nekuti hazvioneke, kunyanya kana vazhinji vedu tichishandisa makavha uye izvo zvinoita kuti zvive zvishoma kana kutoshaya chinhu.
Chinhu chakashata pamusoro pekamera inonamira panze ndechekuti pese patinoisa foni kumwe kunhu, tinogara nekutya kuti ichakwizwa kana kukochekerwa kana kurohwa ichipesana nechimwe chinhu, kutya kusinga nyangurike kunyangwe iri safire sei.
Nezve mabhendi ari kumashure, haana kunyanya kutyisa uye munhu wese akajairira ipapo ipapo, pamwe nekuda kweizvozvo (diki diki) iyo 99,99% yenguva izvo zvatino tarisa ndicho skrini, kwete kumashure. Zvirinani kuti ivo havasi, vanogamuchirwa, asi hazvibvise iyo kurota uye hachisi chinhu chakakura dhizaini kutora chimwe chinhu chisingatitambudze, uye hatizive kuti chiripo.
Pindura kuna Humber
Humber, ndanga ndiri Iphoner kubva kekutanga kubuda uye ndiyo yekutanga Iphone yandinofunga kuti yakashata. Musana nemitsetse iyoyo, haina kukodzera Apple. Chero aruminiyamu nhare inovanza mitsara inotyisa zvirinani.
Ino inguva yekutanga kuti ndive ne Samsung (Edge Plus) uye Iphone uye vanhu vanoti iyo Galaxy yakanyanya kunaka kupfuura iyo Iphone.
Pamusoro pekuve "anoramba achienderera", iyo kamera inonamira kunze uye iyo mitsara iri botch. Kana izvi zvikaitwa neimwe mhando, tichavapwanya.
Iphone yakasvika pakakwirira peaesthetics ne4 uye kubvira iwo modhi ivo vakave vakaipa.
Uye ngatirege kukanganwa mafuremu ainayo. Kuti ini ndinodzokera kuEdge Plus, iine skrini yakawanda (5,7 ″) yakareruka uye diki pane iyo 6 / 6s pamwe.
Kana tikawedzera kune izvo, sezvo Ios8, ivo vasingaite zvinhu nemazvo…. Ndinoshamisika kuti chii chiri kuitika kuApple.
Pasina Steve Jobs, Apple haisati yave uye haizove yakafanana …….
Iyo iPhone ine mitsetse yayo uye inobuda kamera haisi nharo yakasimba kune iyo shanduko kune iyo 7 inowedzera kuti igone kuinyudza mumvura ine 4k mukugadziriswa, idzo kana dziri nhau kana ivo vari kuzomirira iyo 7ssplus zvese ibhizinesi
Adobe inotangisa dzidziso kuti udzidze kushandisa Photoshop Sketch pane iyo Pro Pro
Mashandisiro anoita nzvimbo muIOS 9